Iimpawu, ukondla kunye nokuzala kwakhona kwe-whale shark | Ngeentlanzi
Iintlanzi zasemanzini zasemanzini
IsiJamani sasePortillo | | abanye
Ihlabathi lookrebe linomdla ngokupheleleyo. Zijongwa njengamarhamncwa olwandle ngokugqwesa. Abanye ookrebe baziwa ngakumbi kwaye bayoyikwa kunabanye, njenge ukrebe omhlopheoo inkunzi ukrebe, ngenxa yoburhalarhume obukhulu. Namhlanje sithetha ngayo whale shark. Luhlobo lwe-orectolobiform elasmobranch yosapho lweRhincodontidae. Igama layo lenzululwazi ngu Uhlobo lweRhincodon kwaye ithathwa njengeyona ntlanzi inkulu ehlabathini.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-whale shark? Apha sikuxelela yonke into malunga neempawu zayo kunye nendlela yokuphila.
1 Iimpawu eziphambili
2 Indawo yokuhlala i-Whale shark
4 Ukuveliswa kwakhona
Kwimvelo kukho amaxesha apho igama eliqhelekileyo lezinye iintlobo zibangelwa ukufana kwesinye isilwanyana okanye into. Sifumana iintlobo ezithile ezinje nge intlanzi yengwenya kunye intlanzi yezembe, Zombini zibizwa ngokufana kwazo nengwenya kunye nesarha, ngokwahlukeneyo. Kulungile ke, U-whale shark ubizwa ngegama lakhe ukuba ufana nesi silwanyana sikhulu. Ayisiyiyo kuphela ngenxa yobungakanani bayo, kodwa ngenxa yeempawu zayo kunye ne-morphology.
Inobungakanani obukhulu beemitha ezili-12 ubude. Ihlala kumanzi akweleenjiko kunye nakweleenjiko. Nangona kungaziwa ngokuqinisekileyo, kucingelwa ukuba Uhleli kwiplanethi yethu iminyaka ezizigidi ezingama-60, ke luhlobo oluye lwaziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo kwaye lwaye lwavela kakhulu.
Isisu saba krebe simhlophe ngokupheleleyo, kanye njengeso somnenga. Inomqolo ongwevu. Kumnyama kunezona zikrebe zininzi kwaye zinamabala amhlophe okanye atyheli kunye nemigca ethe tyaba kunye ethe nkqo. Kukho abantu abafana nolu hlobo lwe-morphology kunye neenkcukacha kwi-chessboard. Kwezinye iindawo iyaziwa njengentlanzi ye-chess, nangona eli gama lisetyenziswa kakhulu. Kulula kubalo lwabantu be-whale shark banikwe ukuba ayinakuphikiswa ngenxa yobungakanani bayo kunye noyilo.
Inokufikelela kwiisentimitha ezili-10 ubukhulu kulusu. Umzimba uneempawu zehydrodynamic kwaye intloko ibanzi kwaye icabalele. Amacala anamehlo amancinci apho ane-spiracles. Inomlomo omkhulu wokuginya ixhoba ngokukhululeka okukhulu. Ingalinganisa i-1,5 yeemitha ivulekile. Oku kuvumela i-whale shark ukuba iginye isitywina ngokuqubha ecaleni kwaye inamazinyo amaninzi ahlelwe ngemiqolo.
Indawo yokuhlala i-Whale shark
Le krebe ihlala emanzini olwandle ashushu. Ihlala isasazwa kufutshane neetropiki. Ngokwezinye izifundo, bacingelwa ukuba yintlanzi ye-pelagic, ke bachitha elona xesha liphezulu lobomi babo ngaphezulu. Ngamaxesha athile onyaka baye bafudukele kwiindawo eziselunxwemeni apho banokulunyukiswa khona.
Kubonakele kwiindawo ezinje I-Ningaloo Reef eNtshona Ostreliya, iBatangas kwiiPhilippines, i-Utila eHonduras, eYucatán nakwiziqithi zePemba kunye neZanzibar zaseTanzania. Kuqhelekile ukuyifumana elunxwemeni, kodwa nakunxweme nakwii-coral atolls nakufutshane nemilambo imilambo kunye namachweba ayo.
Kuthiwa ayisiyondawo ehlala ezinzulwini ngenxa ihlala igcinwe kubunzulu obuphezulu beemitha ezingama-700. Kumcimbi wobubanzi, uhlala phakathi kwe-30 ukuya kwi-30 degrees. Ihlala iphila ubomi bodwa, nangona ifunyanwa ngamanye amaxesha isenza amaqela okutya kwiindawo ezinkulu ezinokutya okuninzi.
Phakathi kwaba krebe, amadoda kunokwenzeka ukuba ahambe phakathi kweendawo ezahlukileyo, ngelixa abantu basetyhini besekhona. Zihlala zifumaneka kwiindawo ezithile ngakumbi kwaye amadoda kwiindawo ezingafaniyo ngakumbi.
Esinye isizathu sibizwa ngokuba whale shark ngenxa yendlela ezitya ngayo. Ngaphandle kwento onokucinga ngayo xa usiva igama likakrebe, akukho yingozi ebantwini konke konke. Xa sithetha ngookrebe, into yokuqala oyicingayo kukuba ziindidi ezinokusikrazula zize zisahlule kubini kwakamsinya nje emva kokuba sibonane. Ngokuchasene noko, ayisiyongozi ebantwini.
Kwaye oku kungenxa yokuba zitya ngendlela yokucoca amanzi, njengeminenga. Zimbini ezinye iintlobo zikakrebe ezinokukwenza oku, njenge-broadmouth shark kunye ne-basking shark. Zondla ikakhulu kwi-algae, krill, phytoplankton kunye nekton ezikhoyo emanzini.
Kuba ezinye iintlobo zihamba emanzini, awunakusoloko ukhetha xa kuziwa ekucoceni amanzi. Ngesi sizathu, ikwatya ezinye ii-crustaceans ezinje nge-crab larvae, izikolo ezincinci zentlanzi, isardadi, i-mackerel, ityhuna kunye ne-squid.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, amazinyo anawo mancinci, kuba azizidingi phantse nantoni na. Into eyenzayo ukondla kukufunxa amanzi amaninzi kwaye xa uvale umlomo, Ihluza ukutya ngee-gill combs zayo ikhuphe amanzi angenanto yokutya.
Ekuziphatheni kwabo nabantu kunokuthiwa banothando kakhulu kwaye badlala ngeendlela ezahlukeneyo. Kukho iingxelo ezingqina ukuba kukho ookrebe abaza kumphambili wabanye ukuba bakrwempe isisu basuse iiparasites. Abadadayo kunye nabanye banokudada ngokuzolileyo ecaleni kwale krebe ngaphandle koloyiko. Unokuthatha ukubetha okungalindelekanga ngokushukumisa umsila wakho.
Nangona bekunzima ukwazi ukuba yeyiphi indlela yokuvelisa kwakhona, emva kwezifundo ezininzi ukusuka ku-1910 ukuya ku-1996, kwafunyaniswa ukuba abantu ababhinqileyo bane-ovoviviparous. Amantshontsho aqanduselweyo eqandeni ngaphakathi kunina. Bakuba begqibile ukukhula, umama ubazala besaphila. Bazintsana kakhulu. Balinganiselwa kuphela phakathi kwama-40 nama-60 cm ubude.
Akukho nto ingako eyaziwayo malunga nemizekelo emincinci njengoko ingabonakali. Akukho ngxelo ze-morphometric zokwazi ngakumbi malunga nokukhula kwayo kunye nokwazi izinga lokukhula kwayo. Bacingelwa ukuba bafikelele ekuvuthweni ngokwesondo kwi-30s yabo kwaye ubomi babo bunokufikelela kwiminyaka eyi-100.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi lukunceda ukuba wazi ngakumbi nge-whale shark.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Umnenga ukrebe
I-octopus eluhlaza okwesibhakabhaka